डा.रुइतको मिसन, तिलगंगाको छलाङ | रुपान्तरण
डा.रुइतको मिसन, तिलगंगाको छलाङ
८ श्रावण २०७६, बुधबार १६:०४
काठमाडौं । ६४ वर्षिय डा. सन्दुक रुइत अमेरिका, बेलायत लगायत अन्य युरोपियन मुलुक तिर बेला बेलामा गइरहन्छन । विकसित देशका आँखा विशेषज्ञहरुलाई लेक्चरर दिएर फर्कन्छन ।
उनै डा. रुइतले विगत अढाई दशकयता आफुसँगै तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई ‘ग्लोबल ब्राण्ड’ बनाउन सफल भएका छन । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले आफ्नो नेटवर्कमा राखेको छ । आँखाको क्षेत्रमा डब्लुएचओको मान्यता पाउने पहिलो नेपाली संस्था बन्न सफल भएको छ ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गाउँका डा. रुइतले एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिको शल्यक्रिया मार्फत दृष्टि दिएका छन । तिनै डा. रुइतले अढाई दशक अघि डा. रुइतले असम्भव झैं लाग्ने मिशन राखे । जुन मिसनबारे धेरैलाई बताएनन् ।
किनकी अरुलाई सुनाउँदा पनि नपत्याएर खिसिटिउरी गर्ला भन्ने चिन्ता थियो । नेपाल आँखा अस्पतालमा कार्यरत छँदा नै उनले मिशन राखे । मिसन पुरा गनै अस्पतालमा छँदाखाँदाको जागिर छाडे । अहिले त्यो मिसन पुरा भएकोमा उनी खुशी छन । ‘यति छिटै मिसन पुरा होला भन्ने सोंचेको पनि थिइन,’ उनले भने ।
२५ वर्षसम्म आईपुग्दा नेपाल आँखा कार्यक्रम अन्र्तगत संचालित तिलगंगा आँखा केन्द्रको स्तर वृद्धि हुँदै तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान बन्न पुगेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट प्रदत्त जग्गामा निर्माण भइ सन् १९९४ जुन ७ मा तत्कालिन राजा वीरेन्द्र तथा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा उद्घाटन भएको थियो ।
स्थापना पश्चातका साढें दुई दशककमा प्रतिष्ठानले ६० लाख भन्दा बढी सर्वसाधारणको आँखाको परिक्षण तथा उपचार भएको छ । यसका साथै ४ लाख भन्दा बढि व्यक्तिको अत्याधुनिक प्रविधिबाट मोतिविन्दुको साथै अन्यको शल्यक्रियाद्वारा ज्योति प्रदान गरिसकेको छ ।
आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरे वापत विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई आफ्नो कोल्याबोरेटिङ्ग सेन्टरको रुपमा मान्यता दिएको छ ।
नेपालमा आँखाको क्षेत्रमा यसरी मान्यता पाउने प्रतिष्ठान पहिलो नेपाली संस्थाको रुपमा रहेको छ । प्रतिष्ठानको २५ औं वर्षगाँठको अवसरमा आइतबार तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान अन्तर्गत तिलगंगा आँखा अस्पताललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको Collaborating Center को रुपमा घोषणा गरिएको थियो ।
आँखा स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक तथा तालिम अर्थात आँखाको प्राविधिक जन शक्ति उत्पादन अनुसन्धान गरि तिन मुख्य विधाहरुमा डब्लुएचओले मान्यता दिएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डा. रुइत बताउँछन ।
प्रतिष्ठानले आँखा स्वास्थ्यको विशिष्ट सेवाहरु आँखाको नानी, आँखाको पर्दा, जलविन्दु, युभिआइटिस, आँखाको नशा, आँखाको प्लाष्टिक सर्जरी, बाल आँखा, रिफ्याक्टिभ लेजर सर्जरी, आँखाको क्यान्सर साथै सामुदायिक आँखा सेवामा विशिष्ट तालिम प्राप्त नेत्र विशेषज्ञद्धारा सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
आँखा सेवाको लागि चाहिने जनशक्ति नेत्र रोग विशेषज्ञ, अप्ट्रोमेट्रिष्ट, नेत्र सहायक, आँखा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फेलोसिपको माध्यमबाट आँखा क्षेत्रको प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गरिरहेको छ ।
हालसम्म स्वदेश र विदेशका गरी ६ सय ११ जना नेत्र रोग विशेषज्ञ, ७ सय ३२ जना आँखा स्वास्थ्यकर्मी, १० हजार ३ सय ५ सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता र ६ हजार ९ सय १६ चिकित्सा विद्यार्थीलाई लामो, छोटो तथा अवलोकन तालिम प्रदान गरिसकेको छ ।
समयानुसार देखिने रोगहरुको अनुसन्धनात्मक परिक्षण तथा सोध गरी आवश्यक अनुरुपको प्रविधि र प्रक्रिया मार्फत जटिल रोगको निदान गर्न अनुसन्धान विभाग सफल हुदै आएको छ । हालसम्म २ सय १० प्रोजेक्टहरुको सफल अनुसन्धान गरी १ सय ८३ वटा शोध लेखहरु प्रकाशित गरिसकेको छ ।
प्रतिष्ठान मार्फत भइरहेको हालको सेवालाई अझ स्तरीय तथा विशिष्टिकरण तथा आँखा स्वास्थ्यमा अन्तराष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको डा. रुइतले बताए । डब्लुएचओको मान्यतापछि आँखा स्वास्थ्यको क्षेत्रको नयाँ पहिचान बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढ्ने पे्ररणा प्राप्त भएको उनको भनाई छ ।
मोतिविन्दु शल्यक्रियामा हालसम्मको नविनतम प्रविधि Femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) सेवा शुरु हुन गईरहेको छ । अध्ययन तथा तालिम,बाह्य कार्यक्रम, अनुसन्धान लगायतका गतिविधिहरु समेटिएको नेपाल आँखा कार्यक्रमलाई विकासोन्मुख देशहरुले दिगो सेवा प्रदान गर्न सकिने नमूनाको रुपमा अनुसरण गरिरहेका छन् ।
डा. रुइतले नै उत्पादन गरेको लेन्स मुलुकबाहिर निर्यात हुने गरेको छ । वार्षिक साढे ४ लाख उत्पादन हुन्छ । जुन लेन्स चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश , थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, क्याम्बोडिया, भियतनामका साथै युरोप र अफ्रिका लगायतमा मुलुकमा पुग्छ ।
डा. रुइत भन्छन, ‘युरोप ,अमेरिकाको जुनसुकै ठाउँमा गएर हाम्रो सेवाबारे जानकारी दिनु र अरुले सुन्नु चानचुने कुरा होइन । आँखा सेवाको प्लेटफर्ममा बस्दाविकसित मुलुकको जुनसुकै व्यक्तिसँग पनि आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्छौं ।’